मुख्य खबर – Page6– America Nepal
बिदेशमा श्रीमानले कमाएको १ करोड दश लाख लिएर श्रीमती टाप !
उर्लाबारी, दुई छोरी र एक छोराकी आमा श्रीमानले कमाएको साह्रा सम्पत्ति लिएर भाग्दा कस्तो होला ? श्रीमान विदेश भएको मौका छोपी दुई वर्षको काखे छोरा अनि ५ र १० वर्षकी छोरीहरुलाई छाडेर भाग्दा के होला ? नानीहरुको अवस्था कस्तो हुदो हो ? नियमति फोन सम्पर्क हुदाहुदै पनि ३९ महिनापछि स्वदेश फर्कदा सहरावीहिन नानीहरु देख्दा ती अभागी बाबूलाई कस्तो भयो होला ? भोग्नेलाई नै थाहा हुन्छ ! मोरंग
दोलखामा मारिएका तामाङ परिवारको बिलौनाः माओवादीले हामीलाई पनि मार्ने धम्की दिन थाले
गत वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनावले सबैमा खुसीको बहार ल्याउँदा हामीमाथि भने वज्रपात भयो । वैशाख २६ गते राति हाम्रा परिवारका एक मात्र सहारा हाम्रा छोरा, पिता, पति कुलबहादुर तामाङ्गको क्रुरतापुर्वक हत्या भयो । हामै्र गाउँको निलकण्ठेश्वर उच्च माबिको प्रांगणमा उहाँँलाई जुँुगुकै देवी खडका, बिशाल खडकासहितको ३९ जनाले होटलमा खाना खान बसिरहेको बेला चारैतिरबाट घेरा हाली भाला
नेपाली लैजान आएका पाँच भारतीय प्रहरी डोटीमा पक्राउ
डोटीको दिपायल–सिलगढी नगरपालिका–८ लडागडाका लालबहादुर आउजीलाई घरबाटै पक्राउ गरेर लैजाने भारतीय प्रहरीका डिएसपी सहित पाँच जना भारतीय प्रहरी र दुई जना नेपाली गरी सात जनालाई डोटी प्रहरीले बुधरबार राती पक्राउ गरेको छ । भारतीय प्रहरीका डिएसपी नागराजको नेतृत्वमा आएको दुई जना नेपाली सहितका सात जनाको टोली, आउजीलाई गाडिमा हालेर लैजाने क्रममा डोटीमै पक्राउ परेको हो । डिएसपी
दुर्इ श्रीमतीका श्रीमान शत्रुधनकाे घाटी रेटी बिभत्स हत्या
सिरहा । सिरहा नगरपालिका ४ रमौलमा एक युवकको हत्या भएको छ । धारिलो हतियारले घाँटी रेटेर लक्ष्मीपुर ३ थलहा घर भएका अन्दाजी ३५ वर्षीय शत्रुधन यादबको हत्या भएको हो ।हत्या गरिएको अवस्थामा स्थानीयले शव देखेपछि नगर प्रहरी सिरहालाई खबर गरेका थिए । खबर पाउनेवित्तिकै प्रहरी घटनास्थल पुगेको थियो । हत्या गरिएका यादबको शव पोष्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल सिरहा लैजाने सिरहाका प्रहरी
२४ वटा देशलाई पछि पार्दै समिक्षा श्रेष्ठ बनिन् मिस एसिया वर्ल्ड
ताजाखबर, काठमाडौँ । २०१७ की मिस एसिया वर्ल्ड समिक्षा श्रेष्ठले आफ्नो देशलाई विश्वभर चिनाउन पाउँदा आँफ्नो खुशीको सिमा नै नभएको बताएकी छिन् । एसिया र रसियाका गरी २४ वटा देशलाई पछि पार्दै बिजेता बन्न सफल भएकी समिक्षाले उक्त समयमा आँफुले पाएको सम्मान कहिल्यै नर्बिसिने जिकिर गरिन् । ताजाखबरसँगको विशेष अन्तरवार्तामा समिक्षाले सुन्दरता प्रतियोगीतालाई विशेष रुपमा हेरिनुपर्ने
धरानमा काङग्रेश कार्यकर्ता र एमाले कार्यकर्ता बिच झडप!
विजयपुर/धरान– ६ स्थित पानबारीमा नेपाली काङग्रेशका कार्यकर्ता र एमाले कार्यकर्ता बिच झडप भएको छ । झडपमा परि एमालेका दुईजना र नेपाली काङग्रेशका एक जना कार्यकर्ता घाईते भएका छन् । स्थानियबासि इश्वर लामिछानेका अनुसार काङग्रेश कार्यकर्ताले एमालेका कार्यकर्तामाथि आक्रमण गरेपछि झडप भएको छ । घाईते भएका एमालेका कार्यकर्ताहरु निराजन थापामगर र अशोक लुङगेलीमगरका टाउको चोट लागेको
उमेर पुगेन भनेर अभिनेत्रीलाई बारमा छिर्न दिइएन
अभिनेत्री आलीया भट्टले बलिउडमा आफ्नो कब्जा जमाएको पनि ५ वर्ष भइसक्यो । २४ वर्षकै उमेरमा बलिउडको क्यानभासमा आफूलाई आफ्नो कलाले स्थापित गराउन सफल भएकी अभिनेत्री हुन् आलीया भट्ट । २४ वर्षकै उमेरमा उनी विस्तारै सबैको आइकन बन्दै छिन् । आलीयाको बच्चाजस्तो लुक्सले उनलाई उमेरमा सानो देखिन्छ । तर, उमेरले उनी २४ लागिसकिन् । केही समयअघिमात्र उनी लण्डन गएकी थिइन् । बेलायतको उत्त
नेपाल अाइडलमा मंगोलयन अनुहारलार्इ नछानिएकाे दाबी
( यो विरोध होईन सारा नेपालीहरुले गर्व गर्नुपर्ने हाम्रो (Nepal Idol)अन्तराष्ट्रिय प्लाटफर्मको कमजोरीलाई सच्याई प्रतिभा हरुको उचित मुल्यांकन गरी सबै नेपालीहरुले गर्व गर्न योग्य बनाऔ भन्ने मान्यता हो ) यो नेपाल आईडल (Nepal Idol)मैले सुरुदेखी अहिलेसम्म ५ ईपिसोड पोखरा देखी विराटनगर सम्म सरासर हेरीरहेको छु, तर विगतका दिनहरुमा (नेपाली तारा,खोजी प्रतिभाको) लगायतका कम्पिटिसनमा मुलवासी
नवनिर्वाचित गाउँपालिका प्रमुखमाथि आक्रमण
जेष्ठ ७, २०७४- विजय जुलुसबाट फर्किदै गरेका ज्वालामुखी गाउँपालिका प्रमुख विनोद तिमिल्सिनासहित कार्यकर्तामाथि आक्रमण हुँदा उनीसहित ७ जना घाइते भएका छन् । जनप्रतिनिधिहरु खुसीयालीमा विजयजुलुस गरेर घर फर्कने क्रममा करिब ५० जना एमाले कार्यकर्ताहरुले घेरेर आक्रमण गरेका कांग्रेस कार्यकर्ताहरुले बताएका छन् । आक्रमणकारीले वियरका बोतललगायत घरेलु हतियार प्रहार गरेको
कसैले लखेट्नुपर्ने हैसियत मेरो छैन : गगन (भिडियोसहित)
काठमाडौं, वैशाख ३० – नेपाली कांग्रेस नेता तथा स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले शनिबार दिउँसो काठमाडौंको कपन क्षेत्रमा जाँदा भएको प्रचार निकै गलत भएको बताउनुभएको छ । ‘निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउन मैले असयोग गरेको छैन, निर्वाचन आयोगले दिएको समयसम्म मात्रै मैले प्रचारको काम गरेको हुँ, शनिबार दिउँसो कपन जाँदा जुन प्रचार भयो त्यो निन्दनीय छ, म कसैले लखेट्नुपर्ने कमजोर हैसियत भएको